Ukhule kuyo iGarden Court osephethe
UNKK Nomfundo Nzama oyimenenja ehhotela iGarden Court, Marine Parade, ongowesifazane wokuqala ukuliphatha nodlule emagatsheni amathathu aleli hhotela Isithombe: SITHUNYELWE
PHILI MJOLI | December 12, 2019
AKAKAZE asifake isicelo somsebenzi owesifazane oyimenenja yehhotela iGarden Court Marine Parade, eThekwini.
UNkk Nomfundo Nzama odabuka ePort Shepstone, uneminyaka engu-20 esebenza kuleli hhotela emagatsheni ehlukene enza imisebenzi eyehlukene.
Uthi akakaze asifake sicelo somsebenzi, ukuzimisela kwakhe yikho okuye kwaholela ekutheni abaphathi babone ukuthi angakwazi ukubhekana nezinselelo zesigaba esilandelayo somsebenzi.
Uthi wayefisa ukuba ngusonhlalakahle waphuma enyuvesi esewuqalile lo mkhakha kodwa ngenxa yokushoda kwemali wase eyobheka ezikhungweni zezemfundo ezazibizwa ngamaTechnikon ngaleso sikhathi. Zona zazishibhile kunamanyuvesi.
Uthe wayecabanga ukufundela iHuman Resources kodwa umfowabo wamcebisa ngokuthi aye kwiHotel School ngoba uyakwazi ukupheka.
“Ngafika eML Sultan Hotel School, ngakhetha ukufundela iHotel Management. Babebancane abantu abamnyama kulo mkhakha. Kwakungelula ukungena kuwo, indlela yakhona yokuhlunga yayenza ukuthi kunganeni noma ngubani. Uma sekufundwa kwakunzima, abanye bashiye phakathi kuthi kufika isikhathi sokuphothula iningi libe seliyekile,” uchaze kanje.
Uthe waphuma neDiploma in Hotel Management.
EGarden Court, ePort Elizabeth, umsebenzi wokuqala abamnika wona ngemuva kokuphothula ukuqeqeshelwa umsebenzi, kwaba wukusebenza endaweni edayisa utshwala ngaphakathi ehhotela, eyitoho.
“Ake ucabange itoho lokudayisa utshwala wena ube uzitshela ukuthi ufundile kumele ube ngumphathi. Ngalithatha lelo toho ngagcina ngilihlanganisa nelokubheka amabhuku.
“Ngicabanga ukuthi ukuzimisela kwami nokufisa ukubhekana nezinselelo ezintsha, ngokuthi ngenze noma yini okucatshangwa ukuthi inzima, yikho ngasheshe ngathola umsebenzi wokuba sedeskini elamukela izivakashi eGarden Court, South Beach, eyayaziwa ngeHoliday Inn ngaleso sikhathi.”
Uthe akuphelanga isikhathi eside enza lowo msebenzi, bambiza ePE eyokwenza umsebenzi wokuba yiFront Desk Office Duty Manager, okuwumsebenzi okwakuvamise ukuthi utholwe ngabantu abaneminyaka emibili kuya phezulu. Wabe engenaso isipiliyoni saleyo minyaka.
Ngenxa yokuzimisela kwakhe ube ngowesifazane wokuqala ukuphatha eGarden Court oLundi, igatsha eliseSouth Beach, okuyilona elikhulu kunawo wonke futhi elimatasa kanjalo nokuphatha igatsha aliphethe manje iMarine Parade.
Uthe iSouth Beach inamagumbi okulala evile ku-400 kanti iMarine Parade inamagumbi angu-352. Inesidlo sasekuseni, esasemini esasebusuku nohlelo lokuthi amakhansimende a-ode esemagumbini awo. Inanendawo eqashiselwa abanemicimbi.
“Ihhotela elinjalo lidinga ukuthi ulihlele kahle ngoba zonke izinto ezenziwa kulo kumele uzazi zonke. Mina ngikholelwa ekutheni kumele ngifike kuqala emsebenzini ngibheke ukuthi abantu bami engisebenza nabo bakhona, izinsiza kusebenza zisesimeni, ngibone namakhasimende abelele ehhotela ngaphambi kokuthi ngiyohlala ehhovisi.
“Ngiyakholelwa ekutheni impumelelo nokusebenza kwemenenja kulele ekutheni inamaphi amasu ngaleyo nkampani.
Ngiyazi ukuthi abasebenzi bawumgogodla wakho konke, yikho ngithanda ukubanakelela.”